Yunivarsiitii Dirree Dhawaa: 'Lubbuu barattootaa oolchuuf barnoota addaan kutuuf murteessine' - BBC News Afaan Oromoo
Yunivarsiitii Dirree Dhawaa: 'Lubbuu barattootaa oolchuuf barnoota addaan kutuuf murteessine'
Image copyright Yuunvarsiitii Dirre Dhawaa
Barataa Yihunee Alamaayyoo jedhamuu ajjeefamuu hordofee, Yuunvarsiitiiin Dirre Dhawaa barattoota gara maatiisaanitti deebisuuf murteesse.
Pirezedantii itti aanaan Yunvarsiiticha Gargaaraan Pirofesaraa Abbayaa Daggafaa Yunivarsiitichi sirni baruuf barsiisuu sababa addaan kutuuf murteessef BBC tti himaniiru.
''Seenetiin Yuunvarsiiticha lubbu barattoota oolchuuf qaama dhimmichi ilaallatu wajjin mariyatee murteesse'' jedhan.
''Shira mooraan ala, siyaasaa biyya keessatti xaxamuun lubbuun barattoota homaa hin beeknee darbaa waan jiruufi.''
Kaleessa barataan Yuunvarsicha waggaa 3ffa baratu Yihuunee Alamaayyoo jedhamu namoota eenyummaan isaanii hin baramneen ajjeefame.
Tasgabbiin Yuunvarsiichi keessatti dhabamuun kaleessa kan mudate miti.
Barataan Naannoo Amaaraa dhufe ji'a darbe keessa yuunvarsiitichatti gamoorraa darbatamee du'un himamee ture.
Dhimma barata kanaan walqabatuun jeequmsa mudate tasgabbeessuun hoji-manee yunvarsitichi qabu ture. Ta'us hin milkoofne, torban lamaa asitti barattoonni wal miidhaan, wal waraanaa turani jedhu piriezedantii Itti aanaan Yuunvarsiitichaa.
''Barataan tokko waraanameetu miidhame du'aaf jireenya gidduu ture. Barattoonnis maatisaaniitti deeb'uu akka barbaadaniifi barnootaas addaan kutuuf gaafataa turan.''
Yunivarsiitichi baatii tokkoo oliif tasgabbeessanii barnoota itti fufuuf dhama'aa akka ture dubbatu Gargaaraan Piroofeesar Abbayaan.
Guyyaa kaleessaa Barataan Wallagga Lixaa dhufee Yunvarsiitichatti baratu Yihuunee Alamaayyoo naannoo kutaa barnoota Bilook 29tti miidhama irra qaqqabeen lubbuu dhabuu Proofeesar Abbayaa mirkaneessaniiru.
Barattoonni mooraa keessa turaniis Poolisoota naannicha turan wajjiin walitti bu'aniiru nuun jedhan.
Ajjeefamuu barataa Yihuneen booda muddamni guddaan akka tureefi to'annoo humna nagenyaaf bulchiisa Yuunvarsiiticha ol ta'u dubbatu.
Wayita sanatti mooraa Yuunvarsiitichaa keessaa akka turan kan himan Gargaaraan Pirofesaraa Abbayaan, doormiwwan caccabanii turan suphisiisuuf mooraa keessa turu kaasan.
Sabababii kanaan barattootni akka hin miidhamneef jecha gara maatisaanitti deebi'anii akka boqotaniif, ammasitti Yuunvarsiitichis yakka dalagame kana qoratee qulqulleefatee tarkaafii akka fudhatuuf Seneetiin Yuunvarsiitichaa murteesse jedhan.
Seeneetiin Yunivarsiitichaa Muddee 20 booda yeroo hin beekamneef tajaajila kennuu akka dhaabufi barattootnis maatii isaaniitti akka galan muurteesseera.
Guyyota muraasa dhufan barattoota gara biyyasaanitti gaggeessuuf karoorsuu hima.
Amma barattoonni lakkoofsi isaanii kuma lamaa amma kuma sadii guutan jiraachuuu eerun, Yuunvarsiiticha keessatti yaaddoon nageenyaa jiraachuu dubbataniiru.
Barnootni addaan cite ture deebi'ee akka eegalamuu Yuunvarsiitiin Dirre Dhawaa beeksisa baase barattoonni akka mooratti deeb'an waamee ture.
Gidduutti barataan Yuunvarsiitichaa ajjeefamuu hordofuun tasgabbiin dhabamaa adeeme .
Amma Finfinneetti gaggeessuun dhaabbilee maaatisaanii biraa qaqqabsiisanitti kennuuf akka jiran ibsame.
Yeroo hin daangeffamneef tajaajila barattootaaf kennu addaan kutuuf akka jiru akeekkachisaa baase.
Barataan ajjeefame eenyu?
Barataa Yihuunee Alamaayyoo Wallagga Lixaa Gullisoorraa kan dhufe yoo ta'u, muummee barnootaa Baanking fi Faayinaansiitti bara kana eebbifamuuf waraqaa qorannoo qopheessaa ture.
Barataa Yihunee abbaan isaa lubbuun kan hin jirre ta'uufi haatisaa rakkatanii, qoraan gurguruun barsiisaa akka turan barataa kana dhiyeenyatti nan beekaa kan nuun jedhan Pireezidantii Itti-aanaan Yunivarsiitichaati.
Barataa Yihunee gamoorra darbamee du'ee jedhamee akka dubbatamu himanii, Ragaan mana yaalaarra argamee lafumatti reebamee, yeroo konkolaataan fudhamee gara Hospitaalaa geeffamu lubbuun keessaa bahu agarsiisaa jedhan.
''Barataan kun harkii fi miillisaa caccabee, mataan isaa miidhamee daree barnootaa biratti argame.''
Ajjeechaa kanaan walqabatee namni to'atame hin jiru jedha Gargaaraa Piroofeesar Abbayaan.
Eenyutu ajjeesse isa jedhurratti ragaa garaa garaa argachaa jiraachu dubbatu.
Qaama ajjeechaa kana raawwate ilaalchisee shakkiiwwan garaagaraa jiraachuu himanii, adda baafachuuf qaamonni dhimmichi ilaallatu qorachaa jiraachuus himan.
Humni Nageenyaa poolisii Fedaraalaa iddoo barataan kun itti du'e dabalatee, iddoo hundumaatti bobbaafame tures jedhaniiru.
Ministeerri Saayinsii fi Dhabbilee Barnoota Olaanoo guyyoota muraasa dura Yunivarsiitilee hundatti qaamolee nageenyaa Federaalaa bobbaasuun barnootni akka itti fufu murtessuu beeksisee ture.
Barataan Yunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Shaambuutti akkamin du'e?
14 Muddee 2019